Amakhasino aphezulu kakhulu e-Cryptologic South Africa
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / isofthiwe ye-cryptologic
I-Cryptologic yasungulwa ngo-1995 yizelamani uMark noAndrew Rivkin. Baqale bakha indlela yokuvikela ukuhwebelana ku-inthanethi base beqala ukwenza isofthiwe yokudlala ukuhambisana nomkhiqizo wabo.
Lokhu kubalulekile impela njengoba laba kungabantu abakhipha ikhasino ye-inthanethi yokuqala: i-InterCasino. I-Cryptologic ibe neminyaka eyishumi yokusebenza ngempumelelo emakethe yase-US ngaphambi kokuba nomthetho osabekayo i-UIGEA. Ayisabemukeli abadlali baseMelika kepha abantu baseNingizimu Afrika bamukelekile kakhulu ukudlala. Ungazihlolela le softhiwe kumakhasino afana ne-Casino Joy, i-Intercasino, ne-VIP casino.
Imidlalo Yesofthiwe ye-Cryptologic
I-Cryptologic ineminyaka embalwa eyedlula abancintisani bayo futhi okwamanje ingumhlinzeki wesi-2 wemidlalo ye-inthanethi. Lokho akusho ukuthi le nkampane izihlalele futhi ijabulela ukuphumelela kwayo, njengoba ihlezi isebenzela kanzima ukwengeza imidlalo yayo ngemidlalo emisha engamashumi amabili unyaka ngamunye.
Ungalindela ukuthola zonke izintandokazi zakho kanye nokunye. Cabanga imidlalo yetafuleni, i-poker, i-poker yevidiyo, i-blackjack, i-roulette nama-slot. Ama-slot athandwa kakhulu ohlwini lemidlalo ye-Cryptologic futhi iyazi ukuthi ingawakha kanjani ama-slot akhethekile anezimphawu. Le nkampane yenza isivumelwano nenkampane yezincwadi zamahlaya i-Marvel ukukhiqiza imidlalo yama-slot enendikimba yabobopayi be-Marvel. Babuye bakhe ama-slot e-Paramount anabalingisi bamafilimu e-Paramount.
Le khasino inhle uma ufuna ukuhlukahluka. Imidlalo ye-inthanethi ye-Cryptologic ingadlalwa ngezilimi kanye nezimali ezahlukahlukene. Ungadawuniloda isofthiwe noma udlale inguqulo ye-flash, futhi ungahlela izici zomdlalo ukuthi zivumelane nezidingo zakho.